So this afternoon, I heard from various sources that the South
<br>So this afternoon, I heard from various sources that the South
Aspirasi wanita, inspirasi semua?
Ceiling prices for 13 items during Chinese New Year
Names of various anniversaries
One Of A Kind Disabled Facility In Taman Medan Service Centre
Wakey Wakey Tok Seri Hisham..Get Cracking Mann!
AKB48 idol shaves head for dating scandal
ရာဇ၀င်လာ မြန်မာ-အိန္ဒိယလူမျိုးများ (၄)
သမိုင်းဝင် မြန်မာ-အိန္ဒိယလူမျိုးများ (၄)
သမိုင်းဝင် မြန်မာ-အိန္ဒိယလူမျိုးများ (၃)
မြန်မာရာဇ၀င်လာ သမိုင်းဝင် အိန္ဒိယလူမျိုးများ (၄)
မြန်မာရာဇ၀င်လာ သမိုင်းဝင် အိန္ဒိယလူမျိုးများ (၃)
Posted: 02 Feb 2013 07:49 AM PST
So this afternoon, I heard from various sources that the South Korean entertainer, Psy, is coming to Penang on the second day of the Chinese New Year to reprise his Oppa Gangnam Style dance craze.
The way I see it, this isavery desperate measure by the Barisan Nasional but then, this are desperate times for them already. But do they really believe that the people in Penang can be bribed easily by this very shallow move? Do they? I am hardly impressed by this blatant attempt at bribing. And what more, with our own taxpayers' money! What an insult to our intelligence! The Barisan Nasional can certainly do better by being sincere.
Posted: 02 Feb 2013 09:52 AM PST
Klip video ini pendek sahaja namun ia cukup menyentuh perasaan siapa pun yang melihatnya.
Saksikan bagaimana si abang hendak membantu adik perempuannya untuk melintas sebuah parit kecil.
Semoga nilai-nilai murni yang tertanam itu akan kekal sehingga mereka meningkat dewasa.
Saksikan… – MyNewsHub
SAYA adalah seorang wanita yang juga seorang anak, isteri dan ibu.
Sebagai seorang ahli Parlimen yang mewakili warga Lembah Pantai saya juga sentiasa mendengar dan mencari inti pati aspirasi wanita di negara kita.
Pelbagai kajian dan berbilang dasar daripada kerajaan mahupun pembangkang telah dihasilkan dan dilancarkan semenjak Merdeka lagi, termasuk penubuhan sebuah kementerian khas untuk kaum wanita.
Secara ringkasnya, hampir kesemua dasar menyatakan akan 'memperkasakan agenda wanita'.
Pelbagai skim, program dan agenda telah diwujudkan yang telah pun sedikit sebanyak memperkasakan dan mengupayakan wanita.
Tetapi, saya masih mahu mencari inti pati yang ringkas dan mudah difahami untuk menggambarkan aspirasi wanita hari ini.
Sebagai wanita yang bergelar isteri dan ibu, apa yang menjadi tumpuan utama adalah keluarga. Institusi keluargalah yang menjadi teras segala pemikiran, usaha, keresahan, doa dan juga kebanggaan wanita.
Justeru pada hemat saya, segala yang berkaitan dengan membimbing, membangunkan dan menguruskan keluarga adalah sumber inspirasi dan aspirasi wanita.
Aspirasi pertama mungkin adalah mengenai perumahan. Bukan sahaja pemilikan rumah tetapi persekitaran perumahan juga adalah sama penting di dalam menentukan kualiti kehidupan dan suasana pembangunan insan yang terjamin serta teratur, terutamanya untuk anak-anak.
Perumahan dan persekitaran bersih, sihat dan selamat menjadi idaman setiap wanita. Pendek kata, perumahan yang memiliki ciri-ciri Keselesaan, Kebersihan, Kesihatan, Keselamatan dan Kemudahan Awam mesti dijadikan sebagai penanda aras 'hak asas' perumahan. Ini bermaksud setiap kawasan perumahan mesti dibangunkan mengikut ciri-ciri tersebut dan sama penting adalah peluang memiliki rumah secara mudah seperti melalui skim Sewa-Hingga-Milik tanpa dikenakan bayaran faedah untuk rakyat berpendapatan rendah. Aspirasi kedua adalah pendidikan
anak-anak. Seorang ibu sentiasa berdoa agar anak-anak mendapat pendidikan duniawi dan ukhrawi yang akan melahirkan insan yang beriman, berilmu dan beramal.
Segala usaha untuk menyediakan pendidikan termasuk persekolahan yang dekat dengan rumah, kurikulum dan kokurikulum mesti berdasarkan piawaian antarabangsa terbaik.
Apabila sistem pendidikan mula merudum berbanding negara-negara lain atau menjadi terlalu mahal sehingga membebankan kewangan keluarga, harapan seorang ibu adalah tindakan segera mesti diambil tanpa perlu kajian yang memakan masa dan belanja besar.
Aspirasi ketiga adalah pengupayaan potensi dan peranan wanita di dalam ekonomi, pekerjaan, pangkat dan kepimpinan. Jika ada yang meletak sasaran 30 peratus kepimpinan di dalam syarikat, persatuan mahupun kerajaan adalah untuk wanita, KPI ini mesti diletakkan pada tahap 50 peratus kerana ini adalah peratusan wanita yang menjadi rakyat di negara kita. Pengupayaan juga termasuk menyediakan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak di tempat kerja dan perkhidmatan kesihatan wanita yang mampu membantu produktiviti, kerjaya dan kesejahteraan wanita.
Mungkin ada yang mengatakan aspirasi wanita adalah lebih dari yang tiga ini, seperti mahu harga barang keperluan asas turun, harga minyak turun, harga air dan elektrik turun, harga kereta turun, harga rumah turun, hutang negara turun ataupun tangga gaji naik, prestasi pendidikan naik, dan peluang pekerjaan naik manakala rasuah dibasmi, salah guna kuasa dibanteras serta pembaziran ketirisan ekonomi dengan aliran wang haram RM1 trilion dihentikan – buat saya ini semua bukan sahaja aspirasi wanita tetapi semua rakyat negara tercinta ini.
Akhir sekali, jika ketiga-tiga aspirasi asas wanita yang saya nyatakan tadi tercapai, maka martabat wanita dengan sendirinya terpelihara. Ini juga bermaksud masyarakat menghargai peranan dan pengorbanan wanita yang menjadi tunggak keluarga dan negara.
Dan seperti lirik lagu yang sungguh syahdu yang menjadi sumber inspirasi kita semua untuk wanita terutamanya kaum ibu maka dengarlah dan bersama kita jiwai demi anak-anak kita: "Ibu, Ibu, engkaulah ratu hatiku!"
Posted: 02 Feb 2013 06:16 AM PST
Friday, February 01, 2013 - 13:07
THE Domestic Trade, Cooperatives and Consumer Ministry has announced the ceiling prices for 13 items of goods for the Chinese New Year celebrations from Feb6to 17.
Among the items are chicken, eggs, white prawn, pomfret fish, livestock pork and cabbage.
Its minister, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, the ministry would ensure that traders did not overcharge for the items.
"At the same time, it is compulsory for traders to put up pink price tags to differentiate the items from the other goods," he said.
"Our 2,000-man enforcement team, with the help ofaconsumer organisation, will monitor the prices," he said.
"Those caught will be punished under the Price Control and Anti-Profiteering Act 2011 withapenalty of between RM5,000 and RM250,000.
"Last year, 76 traders were caught selling goods above the ceiling prices, and another 25 traders were caught for failing to put up price tags."
Ismail said the maximum prices for the 13 items would differ by about 10 per cent in the 146 districts nationwide.
Chicken will be sold at RM7 per kg, egg up to 35 sen each, imported cabbage (excluding those from China and Indonesia) at RM3.30 per kg and pork at up to RM22 per kg.
Consumers were advised to complain to 1-800-886-800 if they were overcharged.
Posted: 02 Feb 2013 05:39 AM PST
Sourse: the freedictionary
Posted: 02 Feb 2013 02:35 AM PST
'Harga murah punca krisis air di Selangor'
Posted: 02 Feb 2013 01:32 AM PST
DATELINE TAMAN MEDAN PETALING JAYA:
ABOUT 80 PERSONS turned up at the launch this morning ofadisabled-friendly car park and ramp here. It was built by the Petaling Jaya City Council (MBPJ) for access to the service centre of State Assemblyperson Haniza Talha.
The project which began in October of last year was finally finished last week. A lot of details had gone
Posted: 01 Feb 2013 08:26 PM PST
A senior wargamas smsed me early this morning..here are some of her worries and concerns of the declining safety in her area and the dangers now..the effects of allowing too many foreigners of all sorts roaming freely in our once peaceful days...or is the free citizenship for votes influx bringing in more criminals into our blessed homeland??
Anyway..many of our meek citizens are terrified day and night.
I have laid down some of her woes my style.
But some are hers because that will look more original.
She lives in Serdang Raya..near Astro and South City in highway2Seremban..Chinese area.
Sorry, I am notaracist or anti pendatang dengan izin.
Banyak pendatang Mynmar, Africans and Indons..rajin, malas, kaya semua ada.
I was told it isagood economic area..maknanya bustling with business..but everybody MYOB..'mine your own business'.
GATED yet breakins siang buta..dah senyap my road..
In other words she is trying to say that residents are afraid to go out unless necessary.
Lari dari KD sini pun gitu.
Worried now if Aliim having it..( One of her grandsons dah2hari demam panas ).
Slam HISHAM Onn..Hi crime n koboi cops.
Ragut rampant..I tak brani jalan ke kedai pun.
Sini Indians and Indons peragut.
Kat 99 wary if near closing..Jangan gi beli2..dah banyak kali kna..I believe she meant there were already so many cases that has happened.
7E macam tempat lain.
U read about budak6t jatuh balkoni?
Kawan mak dia fon anak found dead.
Mak dia fon minder baru she go tengok.Duit ambik but job cuai.
A lady with4yr old kena ragut @ Usj1afew days back putting the girl in car..mula2 tug then slash with pisau.Dis free citizenship4votes influx of maring n robbers even S. Americans. My plce Africans.Tak rob but prey on emotions.Sawadoubtful backgrnd CHING kendong anak with pakitam by hr side.Lots of Arabs and Irans 2..M'sia dah tak safe macam when we were kids.
If not walking predators, aedes and kencing tikus..and careless childminders.
Of course I did not share everything..but I can tell you Dato' Seri Hisham..BN can lose precious votes if you don't buck up!
Stay safe and take care Ngah..salam kat everybody yea.
Hope I have highlighted your frustration effectively.
Posted: 01 Feb 2013 11:55 PM PST
Posted: 01 Feb 2013 09:58 PM PST
Japanese pop group AKB48 member Minami Minegishi has taken the extreme to apologise for her dating scandal by shaving her head.
The 20-year-old was caught sleeping over ataman's place by the paparazzi, which is strictly forbidden by the group's management. As strange (and perhaps as inhuman) as it sounds, the idol-no-dating rule is very common in East Asia, though there's not many agencies that enforced the regulation as religiously as AKB48.
It's said that she shaved her head on her own accord. Whether she's told to do so or not it shows how much pressure she was in to try and get out of the trouble.
Although many people has said that the (self) punishment is too harsh, the act might actually save her AKB48 career as she was "merely" demoted to trainee status. There were others who were penalised heavier (expelled etc.) for lesser evidence.
AKB48 idol shaves head for dating scandal from YeinJee's Asian Journal
Posted: 01 Feb 2013 08:30 PM PST
(ညွှန်း AP PHAYRE, HISTORY OF BURMA LONDON, 1883. Pg 293-304)
အာရကန် (ရခိုင်) ရှေးမှတ်တမ်းများအရ ပထမနိုင်ငံကို ဘီစီ(၂၆၆၆)ကပင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဝေသာလီကို ဟိန္ဒူ ချန္ဒရာ တို့က တည်ထောင်ခဲ့သည်။
မြောက်ပိုင်း ရခိုင်ကို ဟိန္ဒူနန်းဆက်များက ရှစ်ရာစု မတိုင်မီထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။
အေဒီ (၇၈၈)၌ ချန္ဒရာ နန်းဆက်က ဝေသာလီကို တည်ထောင် အုပ်ချုပ်ခဲံ့သည်။ ကုန်သွယ်ရေး ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး သင်္ဘောတစ်ထောင်ခန့် နေ့စဉ်ဆိုက်ကပ်ခဲ့သည်။
သို့သော် ချန္ဒရာဘုရင်များမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ စစ်တကောင်းထိ မြေပိုင်ဆိုင်သည်။ အိန္ဒိယ ဟိန္ဒူတို့၏ ဘင်္ဂါလီနိုင်ငံ၏ တစ်စိပ်တစ်ဒေသဖြစ်သည်။
(ညွှန်း MS COLLIS, Ankaui place in the Civilization of Bay of Bengal, Journal of Burma Research Society, 50th anniversary Publication No 2. Rgn 1960, Pg 486)
ဝေသာလီမှာ အိန္ဒိယအမည် VAISALI ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်သွယ်မှု ရှိခဲ့သည်။ ဘုရင် (၁၃)ပါးက နှစ်ပေါင်း (၂၃၀) အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
ဒုတိယမြောက် မင်းဆက်ကို ဘုရင် SRI DHAMA VIJAYA ခေါ် သာကီဝင် အိန္ဒိယသား အစစ်က AD ရှစ်ရာစုတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူ၏ မြေးတော်သူက ပျူသရေခေတ္တရာမင်း၏ သမီးတော်နှင့် လက်ဆက်ခဲ့သည်။
(ညွှန်း BURMA DGE HALL Prof of London & History Dpt. Rgn, 3rd Edit 1960 Pg 8-9)
ဝေသာလီရှိ .ဟိန္ဒူရုပ်တုများနှင့် ကျောက်စာများ
ဝေသာလီမြို့ပျက်၌ ဟိန္ဒူရုပ်တုများနှင့် ဟိန္ဒူကျောက်စာများ တွေ့ရှိရသဖြင့် ထိုအေဒီရှစ်ရာစု၌ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားနေသော်လည်း ဟိန္ဒူနှင့် ဗြဟ္မာ အယူအဆများ ယှဉ်တွဲထွန်းကားနေသည်ဟု ယုံကြည်ရပါသည်။
စစ်တကောင်း (သို့မဟုတ်) စစ်တွေကုန်
အာရကန်ဘုရင် စူလတိုင် ချန္ဒရာ (AD 951-957)က စစ်တကောင်းကို (AD 953)တွင် အာရဗ်အကြီးအကဲ (THURATAN)ထံမှ တိုက်ခိုက် သိမ်းယူခဲ့သည်။ စစ်အောင်နိုင်မှု အထိမ်းအမှတ် ကျောက်စာ စိုက်ထူခဲ့ပြီး မြန်မာစာဖြင့် စစ်တွေကုန်ဟု မှတ်ကျောက်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကျောက်စာအရ ကာရွှေ့ကျော်ပြီး ယခု စစ်တကောင်းဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုကြသည်။ (ညွှန်း AP PHAYRE Pg 36)
စစ်တကောင်းမှာ လက်ပြောင်းလက်လွှဲများ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိသော်လည်း (AD 1580) မှ (AD 1666)ထိ နှစ်တစ်ရာမျှ အာရကန်ရခိုင်ဘုရင်များ၏လက်သို့ ကျဆင်းရှိနေခဲ့သည်။ ရခိုင်များက မြောက်မြားစွာသော
ဘင်္ဂါလီများ ကို ဖမ်းဆီးပြီး လယ်ကျွန်များအဖြစ် အသုံးချခဲ့ကြသည်။
ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများ (သို့) မားဂ် (MAGH)
ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများမှာ မာဂဓ (Maghada) ၏ နယ်သား အိန္ဒိယ အာရိယန်လူမျိုးဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့မှာ အိန္ဒိယမွန်ဂိုများနှင့် တိဘက်မြန်မာတို့ ရောနှောနေသောလူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။
( HG Hall History of South East Asia)
အာရကန် ရခိုင် မာဂများသည် ပေါ်တူဂီ ပင်လယ်ဓားပြများနှင့်ပူးပေါင်း၍ အေဒီ ၁၆ ရာစုနှင့် ၁၇ ရာစုအတွင်း၌ ဘင်္ဂလားနိုင်ငံအရှေ့နှင့် တောင်ပိုင်းမြစ်ကျောတစ်လျှောက် လှည့်လည်ပြီး ဓားပြတိုက်ခြင်းပြုခဲ့ကြသည်။
အသေးစိတ်အချက်များသိလိုပါက J.N. SARKAR: THE FERINGHI PIRATES of CHATGAON; Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. 111, 1907 page 419 to 525 နှင့် F BEMIER; Travels in the Mughal Empire Delhi 968 P-175)
ကုလားတန်မြစ်နှင့် နာဖ်မြစ်ကမ်းလယ်ယာများ၌ လယ်ကူလီကျွန်အလုပ်သမားများအဖြစ် စေခိုင်းကြရာ ရခိုင်ပြည်လူဦးရေ၏ ၁၅%ပင် ဖြစ်လာသည်။
(AP Phayre, Account of Arakan, Journal of the Asiatic Society of Bengal Volume X, 184; P 681)
မြန်မာများ အာရကန် (ရခိုင်) သို့ ၀င်ရောက်အခြေချခြင်း
မြန်မာများသည် အေဒီ ၁၀ ရာစုနှစ်နောက်ပိုင်းမှသာ ရခိုင်သို့ ၀င်ရောက်အခြေချလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် ရခိုင်ရှေးမင်းဆက်များမှာ အိန္ဒိယအနွယ် သာကီဝင်မင်းမျိုးများဖြစ်ပြီး လူထုအများစုမှာ ဘင်္ဂလီ (ဘင်္ဂါလီ) များဖြစ်ကြသည်။ သမိုင်းဝင် ရခိုင်မြို့တော်များမှာ ရခိုင်မြောက်ပိုင်း၊ စစ်တွေအနီးပတ်ဝန်းကျင်၌သာ ရှိကြသည်။
(ညွှန်း DGE HALL History of South East Asia, New York 1968 P-359)
အာရပ်မွတ်စလင်မ်များသည် ကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုဖြင့် အေဒီရှစ်ရာဘီစုက စတင်ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ရခိုင်ပြည် အာရကန်သို့ အစ္စလာမ်ဘာသာ စတင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က အာရပ်များသည် အရှေ့တိုင်း ရေကြောင်းသွားလာရေးကို လုံးဝနီးပါး ကြီးစိုးထားနိုင်ခဲ့ကြသည်။
(ညွှန်း Muhamal Abdur Rahman, Social and Cultural history of Bengal, Volume 1 Karachi 1963 P-37)
ဒေါက်တာမိုဟမ္မဒ် ENAMUL HAQUE က ရခိုင်ရာဇ၀င်ကို ကိုးကား၍ အာရပ်များသည် အေဒီ ၁၀ ရာစု၌ MEGHNA မြစ်ဝမှ အရှေ့ဖက်တွင် နတ်မြစ်မြောက်ပိုင်းအထိ အခြေချနေထိုင်လာကြ၏ ဟုဆိုသည်။ (အညွှန်း DR MUHAMAD ENAMUL HAQUE, Purba Pakistane Islam, Dhaka 1948. P 16-17 နှင့် ENAMUL HAQUE and SHAHITYA BISHARAD, Arakan RAJSHASHAJ Bangla Shahitya, Calcutta 1935. P 3)
ဒေသခံများနှင့် အိမ်ထောင်ပြုရင်း မွတ်စလင်လူဦးရေ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်များနှင့် ဘာသာရေးမှလွဲ၍ ဆင်တူကြပြီး မြန်မာလိုရေး၍ ရိုးရာစကားကို ပြောကြသည်။
(အညွှန်း DGE HALL Studies in Dutch Relations with Arakan, Journal of Burmese Research Society vol. xxxi 1936. Pg6and Mr. R.B Smart Burma Gazetteer, Akyab District vol A Rangoon 1957)
ရုရှားကုန်သည် ATHANASIUS NITIKIN က အေဒီ (၁၄၇၀)ခုနှစ်တွင် မွတ်စလင်မ် ဆူဖီများစွာ ပဲခူး၌ ရှိခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါသည်။
(ညွှန်း G E HERVAY History of Burma, London 1925. P 121)
ရမ်းဗြဲကျွန်းသို့ မွတ်စလင်မ်များ သဘောင်္ပျက်ပြီး ရောက်လာခြင်း
အာရကန် ရခိုင်ဘုရင်များ ရာဇ၀င်၌ MAHAT-Y-ING CHANDAYAT (AD 780-810) မင်းလက်ထက်တွင် နိုင်ငံခြား သင်္ဘောမြောက်များစွာ ပျက်စီးပြီး ရမ်းဗြဲကျွန်းပေါ် ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါသည်။ ဘုရင်က ရခိုင်ရွာများ၌ နေရာချထားပေးခဲ့ကြောင်း ပါရှိ၏။
(ညွှန်း A.P PHAYRE Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol. XII, Part I 1844. P.36)
နရမိက္ခလ (သို့) စူလိုင်မန်ရှား (1404-1434)
နရမိက္ခလကို အကြောင်းပြု၍ မွတ်စလင်မ်တို့ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွါးရေးကို ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်စေနိုင်ခဲ့သည်။
နရမိက္ခလမှာ အင်းဝကို စစ်ရှုံး၍ မွတ်စလင်မ် မဂိုအင်ပါယာအောက်သို့ ၀င်ရောက်ခိုလှုံခဲ့ရသည်။ မွတ်စလင်မ်စစ်သည် တစ်သိန်းကျော်၏ အကူအညီဖြင့် ထီးနန်းပြန်လည် သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီး မြောက်ဦးမင်းဘက်အဖြစ် မြို့ဟောင်း၌ စူလိုင်မန်ရှားဟူသောဘွဲ့ဖြင့် စိုးစံတော်မူခဲ့သည်။ (ညွန်း မိုရှေးရေဂါ P. 18)
GAUR ဘင်္ဂလီစူလ်တန်နိုင်ငံ၏ စူလ်တန်အဟမတ်ရှားက စစ်ပြေးရခိုင်ဘုရင်ကို ခိုလှုံခွင့်ပေးခဲ့သည်။ အဟမတ်ရှား၏ စစ်တပ်၌ အရာရှိအဖြစ် အမှုထမ်းခွင့်ပေးခဲ့သည်။ စူလ်တန်၏ စစ်ပွဲများတွင် စစ်ပြေးရခိုင်ဘုရင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ပေးခဲ့သည်။
(၁၄၃၀)ခုနှစ်တွင် အဟမတ်ရှားကို ဆက်ခံသူ Nadia Shah က နရမိက္ခလ၏ စစ်ရေးအကူအညီတောင်းမှုကို လက်ခံပြီး သူ၏ စစ်ဗိုလ်ချုပ် ၀လီခန် VELI KHAN ၏ စစ်တပ်ကို နရမိက္ခလအား ကူညီရန် ထည့်ပေးလိုက်သည်။ ၀လီခန် သစ္စာဖောက်သွားသဖြင့် Nadia Shah ၏ အခြား စစ်တပ်တစ်ခု အကူအညီဖြင့် ရခိုင်ကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက် အောင်မြင်ခဲ့သည်။
နရမိက္ခလက မွတ်စလင်မ် စစ်သားများကို မြို့ဟောင်းအနီး၌ နေရာချထားပေးသည်။ သူတို့က SANDIKHAN ဗလီကိုတည်၍ ၀တ်ပြုရာ ယနေ့အထင်ကရ ရှိနေသေးသည်။
ထို့ကြောင့် မွတ်စလင်မ်များမှာ (၁၄၃၀)ကစတင်၍ အခြေကျနေထိုင်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ရေကြောင်း၊ ကုန်းကြောင်း ဆက်သွယ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုများကြောင့် ရခိုင်ရာဇ၀င်တွင် ထင်ရှား၏။
(အညွှန်း R.C MAJUMDAR, Hindu Colonies in Far East. Calcutta 1944. Pg 202-205-206)
ရခိုင်ဘုရင်ဒင်္ဂါးများပေါ်၌ အစ္စလာမ် ဘာသာရေးစာများ ပုံနှိပ်ဖော်ပြထားခြင်း
အေဒီ(၁၄၃၀)မှစ၍ ရခိုင်နန်းဆက်မှာ ဘင်္ဂါလီလက်အောက်ခံများဖြစ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် ရခိုင်ဘုရင်များမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်သော်လည်း မွတ်စလင်မ်ဘွဲ့အမည်များ ခံယူထားပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာသက်ဝင်မှု၌ အရေးပါဆုံးသော ခံဝန်ကတိပြုချက်ဖြစ်သည့် "အလ္လာဟ်ဘုရားသခင် တစ်ပါးတည်းသာ ရှိတော်မူ၍ မုဟမ္မဒ်သခင်သည် ဘုရားသခင်၏ တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်း" စာတမ်းကို ဒင်္ဂါးများပေါ်၌ ခတ်နှိပ်ဖော်ပြထားသည်။
(ညွန်း 1/M.ROBINSON AND L.A SHAW, The Coins and Bank Notes of Burma, England 1980. Pg-44
2/ GE HARVEY P-140)
အထက်ပါ မွတ်စလင်မ်ဘွဲ့အမည်ကို ယူ၍ အစ္စလာမ်ကို သက်ဝင်မှု ၀န်ခံချက် ဒင်္ဂါးသွန်းလုပ်ခြင်းအမှုကို ရခိုင်ဘုရင်များက (၁၇)ရာစု တစ်ဝက်ခန့်အထိ စဉ်ဆက်မပြတ် ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။
သီရိသုဒ္ဓမ (THIRITHUDAMMA) (1622-1638)၌ မင်းတိုင်ပင် ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိခဲ့သည်။
(ညွှန်း ပေါ်တူဂီခရီးသွား Augustine ဘုန်းကြီး Sebastain MANRIQUE အာရကန်၌ 1629-1637 မှတ်တမ်း)
သူက အရေးပါသော နန်းတွင်းမွတ်စလင်မ် အမှုထမ်းများနှင့် မွတ်စလင်မ် ကုန်သည်များသာမက မွတ်စလင်မ်အကျဉ်းသားများကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ အကျဉ်းသားများမှာ ဘင်္ဂလားမှ ကျွန်အဖြစ်ခိုင်းရန် ဖမ်းလာသူများ ဖြစ်သည်။ သူက ထိုမွတ်စလင်မ်များကို ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ သွတ်သွင်းရန် ကြိုးစားရာ မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။
MANRIQUE က ဘုရင်နန်းတက်ပွဲ၌ မွတ်စလင်မ်တပ်ဖွဲ့များ အရေးပါစွာ ပါဝင်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရဂ်ျပုတီးမှ မြင်းတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က နန်းတက်ပွဲကို ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
၎င်းမြင်းတပ်နောက်မှ သင်းကွပ် ဓားကိုင်တပ်ဖွဲ့ ချီတက်ခဲ့သည်။ ထိုမွတ်စလင်မ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ ကတီပါအစိမ်းပေါ်၌ ငွေပြားခတ်ဝတ်စုံ ၀တ်ပြီး အာရေဗျမှ မြင်းဖြူအကောင်းစားများကို စီးနင်းခဲ့ကြောင်း ကိုယ်တွေ့ရေးခဲ့သည်။
မြင်းသည်တော် (၆၀၀)ပါရှိပြီး မဂိုရ်စစ်သားများမှာ ပိုးသားဝတ်စုံ အစိမ်းများကို ၀တ်ထားကြသည့် လေးသည်တော်များ ဖြစ်ကြသည်။
မွတ်စလင်များသာမက ပေါ်တူဂီများ၊ ခရိယံဂျပန်ကြေးစားစစ်သားများ ပါဝင်စစ်ရေးပြခဲ့သည်။ ထိုသူတို့ကို ဘုရင် ဘိသိတ်ခံသော ဘုရားအတွင်းသို့မူ ၀င်ခွင့်မပြုခဲ့ချေ။
(ညွှန်း မိုရှိရေဂါ P-21)
အိုရီဆာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အိန္ဒိယ နယ်ချဲ့များက မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းကို ၀င်ရောက်ပြီး ဘီစီ(၅၀၀)ကပင် ဘုရားများ တည်ထားကြောင်း အထောက်အထားများ ရှိ၏။
(HGE HALL HISTORY OF SOUTH EAST ASIA)
သာမလ နှင့် ၀ိမလ
သာမလ (Indian Thalma သာလမာ) ၀ိမလ (အိန္ဒိယ Vimala ဗိမလ)မင်းသားညီနောင်က ပဲခူးမြို့ကို အေဒီ ၅၇၃က တည်ခဲ့သည်။ တပင်ရွှေထီးက အေဒီ ၁၅၃၉၌ သိမ်းယူခဲ့သည်။
(U Pe Maung Tin HG LUCE Glam Palace Chawle of King of Binm)
အန္ဒယာ မင်းဆက် (ANDRA DYNASTY)
အိန္ဒိယအလယ်ပိုင်းမှ ဟိန္ဒူ အန္ဒယာ နယ်ချဲ့ကိုလိုနီများက ဘီစီ (၁၈၀)ခန့်က မြန်မာပြည်ကို ထိုးဖောက် အခြေချ၍ ဟံသာဝတီ (မွန်မြို့)နှင့် သံလျင်မြို့ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
အဘိရာဇာ (သို့မဟုတ်) အဘိရာဂျာ
ဗမာအစ တကောင်းကဟု အချို့က ဆိုကြသည်။ အဘိရာဂျာမှာ သာကီဝင် မင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ကပိလ၀တ် (KAPILAYATTHU-INDIA) မှ ပန်ချလာမင်း (PANCHALA-INDIA) (ဇာတိ VITATUPA) ကို စစ်ရှုံး၍ ပြေးလာခြင်းဖြစ်သည်။
အဘိရာဂျာသည် ထိုအိန္ဒိယအလယ်ပိုင်းမှပြေးလာပြီး SANGASSARATTHA သို့ SANGASSANAGARA ယခုအခေါ် တကောင်း၌ တိုင်းပြည်ထူထောင်၍ မင်းလုပ်၏။
(အညွှန်း U Pe Maung Tin and GH Luce မှန်နန်းရာဇ၀င် စာမျက်နှာ ၂.
Prince Abhiyaza was lord of the Kapilavastu (ကပိလဝတျ) region of Kosala—the very birthplace of the historical Buddha three centuries later.Harvey, G. E. (1925). History of Burma: From the Earliest Times to 10 March 1824. London: Frank Cass & Co. Ltd.1925: 307–309.
Hmannan Vol. 1 2003: 153–155)
(Pe Maung Tin GH Luce မှန်နန်းရာဇ၀င် စာမျက်နှာ ၂)
အဘိရာဂျာကွယ်လွန်ပြီး ကံရာဂျာငယ် နန်းတက်၍ သားကြီး ကံရာဇာကြီးသည် ဧရာဝတီမြစ်အတိုင်း စုန်ဆင်းရာ သာလာဝတီမြစ်အတိုင်း ဆန်ဆက်၍ ကုလားတောင်သို့ ရောက်ရှိပြီး RAJAGAHA အဖြစ် ရှေးဟောင်း အာရကန် (ရခိုင်)ကို အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပါသည်။
ကံရာဇာကြီး၏သား MUDUCITTA မုဒုကျစ်တ
ကံရာဇာကြီး၏သား Muducitta သားသည် မင်းဖြစ်လာသည်။ သူသည် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ကိုတည်ခဲ့ပြီး ဒည၀တီကို စစ်နိုင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
(အထက်ပါ မှန်နန်းရာဇ၀င် P-2 Line 22)
ဘိန္ဓက ရာဂျာ BHINNAKA RAJA
မြောက်ဘက်မှ ကျူးကျော်လာသောတရုတ်တို့က တိုက်ခိုက်၍ တကောင်းမြို့ကို ဖျက်စီးသည်။ တကောင်းမင်း ဘိန္ဓကရာဂျာ ပြေးဆင်းပြီးနောက် ကွယ်လွန်၍ နောက်လိုက်များ သုံးစုကွဲသွားသည်။
၄င်းတို့မှ တစ်စုသည် အရှေ့ဘက်၌ ရှမ်း (၁၉) ပြည် တည်ထောင်သည်။
(မှန်နန်း P-3 Line 4-7)
တကောင်းမှပြေးလာသော အခြားတစ်စုမှာ ဧရာဝတီမြစ်အတိုင်းဆင်းလာပြီး Muducitta နှင့် ၄င်း အိန္ဒိယ သာကီဝင်မင်းသမီး (ပျူ ကမ်းယံ သက် အုပ်စု ခေါင်းဆောင်) တို့နှင့် ပူးပေါင်းမိသွားသည်။
(မှန်နန်း P-2,3,6 မှ)
နာဂစိန် (အိန္ဒိယသာကီဝင် မင်းသမီး)
တကောင်းပြေး တတိယအုပ်စုသည် မာလီ (MALI)၌ သာကီဝင်မျိုး ဘုရင်မ နာဂစိန်အောက် ခိုဝင်ကြသည်။ နာဂစိန်မှာ သာကီဝင် အိန္ဒိယမင်း DHAJA RAJA၏ မိဘုရားဖြစ်ပြီး စစ်ရှုံး၍ မြန်မာပြည်ဘက် ခိုလှုံလာသူ ဖြစ်သည်။ လမ်း၌ သင်းတွဲ 'THINTWE' မြို့ကို တည်ထောင်ပြီး ပုဂံအထက်ပိုင်းကို ထူထောင်သည်။
(မှန်နန်း P 3,4830)
DAHNAVATA ကပျူဘုရင်မ သံဘူလကို ဖမ်းသည်။ သို့သော် နန်းခမ်း (NANKHAM- CHINA) ပျူဘုရင်မက သံတွဲ- တောင်တန်း (၇)သွယ်နေ ကမ်းယံများကို နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။
(မှန်နန်း P 6, 12 . 13)
သာကီဝင် အဘိရာဂျာ၏ အဆက် ဒွတ္တဘောင်က သရေခေတ္တရာကို ဘီစီ (၄၃၄)၌ ထူထောင်သည်။
(Ref: 1. မှန်နန်း P 7, 9, 13, 21, 23, 83, 88, 86 and 94
2. Aung-Thwin, Michael (1996). "Kingdom of Bagan". In Gillian Cribbs. Myanmar Land of the Spirits. Guernsey: Co & Bear Productions. ISBN 0952766507.)
Mashe Yega, Muslims of Burma
HGE Hall History of South East Asia
"BURMA" DGE Hall Professor, University of Landon and Rangoon.
တောင်ပိုင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဒရပ်ကမ်းခြေမှ TALINGANA တလင်းဂါးနား ပြည်နယ်မှ ပြောင်းရွှေ့လာသော တလိုင်းများသည် တရုတ်ပြည်မှ ဆင်းသက်လာသော မွန်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ (ANDRA) အန္ဒရာ နှင့် (ORISSA) အိုရစ္စာ နယ်ချဲ့များကို တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ထို မွန်တလိုင်းများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လက်မှုပညာ (ပန်းဆယ်မျိုး)၊ စာပေ၊ ပိဋကတ်သုံးပုံမှစ၍ ခေတ်သစ် ယနေ့ မြန်မာ့အခြေခံများကို ယူဆောင်ပေးခဲ့ကြသည်။ ပဲခူးနှင့် သထုံမြို့များကို ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။
အနော်ရထာမင်းက မွန်ဘုရင် မနုဟာကို အေဒီ (၁၀၇၅)၌ အောင်နိုင်ခြင်းက မြန်မာနိုင်ငံကို အိန္ဒိယ မြန်မာဆက်ဆံရေး လမ်းစ ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်သမျှကို သီဟိုဠ်ကျွန်းနှင့် အပြန်အလှန် ကူးလူးဆက်ဆံ နိုင်စေခဲ့သည်။
အထက်ပါ အချိန်မတိုင်ခင်က အိန္ဒိယမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစွန်းရောက် ဇာတ်ကွဲ အရည်းကြီးတို့က ပုဂံကို မင်းမူထားခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိ အိန္ဒိယ၌ အရီးဟူသော ဂိုဏ်းဝင်များ ကျန်ရှိနေသေးသည်။
အိန္ဒိယ ဘင်္ဂါလီမင်းသား ပဋိက္ခရား
(ညွှန်း မှန်နန်း P 105-106)
ကဋိက္ခရားမင်းသားနှင့် ကျန်စစ်မင်း သမီး ရွှေအိမ်စည်တို့၏ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို အများသိကြပြီး ဖြစ်၏။ မြန်မာပြည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အရပ်၌ အိန္ဒိယအနွယ် နိုင်ငံ(၃)ခု ရှိခဲ့ပြီး တစ်ခုမှာ ပဋိက္ခရားနိုင်ငံဖြစ်သည်။
Posted: 01 Feb 2013 07:05 PM PST
Posted: 01 Feb 2013 07:03 PM PST
(အညွှန်း U Pe Maung Tin and GH Luce မှန်နန်းရာဇ၀င် (စာမျက်နှာ ၂ )
(မှန်နန်း P 7, 9, 13, 21, 23, 83, 88, 86 and 94)
Posted: 01 Feb 2013 06:39 PM PST
● Anggaran kasar 1.2 juta tan sisa WLP yang dihasilkan dari Kilang LYNAS haruslah dilupuskan dengan segera di Pusat Pelupusan Kekal atau "Permanent Disposal Facility (PDF)" yang masih tidak kelihatan sehingga ke hari ini. Operasi kilang Lynas tidak seharusnya diluluskan tanpa Pusat Pelupusan Kekal atau PDF itu.
● Kemudahan Simpanan Residu atau "Residue Storage Facilities (RSF)" yang dibina di kilang Lynas di Gebeng, Kuantan untuk menyimpan residu/sisa dengan menggunakan hanya 1mm lapisan HDPE dan satu lapisan 30cm tanah liat tidak akan diluluskan di Negara Jerman malah untuk sisa toksik yang paling rendah kategorinya sekalipun. Isu kelembapan lapisan RSF ketika waktu hujan dan ketika musim tengkujuh termasuklah keperluan pengeringan untuk simpanan sisa WLP di atas RSF yang tidak diambil kira oleh LYNAS, Kemudahan Simpanan Residu atau RSF itu tidak seharusnya diluluskan oleh agensi yang berkaitan (AELB).
"Saya ingin mencabar semua pihak yang berkenaan khususnya AELB, Menteri Besar Pahang, Mustapa, Maximus Ongkili dan Najib untuk menjelaskan setiap butiran kajian itu dengan terperinci kerana jelas semua isu yang dibangkitkan Gerhard Schmidt yang mewakili Institut OEKO Eropah itu mempunyai asas saintifik dan fakta teknikal yang kukuh. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahawa Lesen Sementara Operasi(TOL) perlulah dibatalkan dan operasi kilang LAMP milik Lynas haruslah dihentikan serta-merta demi keselamatan dan kesihatan penduduk setempat termasuklah ancaman kepada Alam Sekitar", ujar beliau yang kecewa dengan sikap AELB, MITI dan MOSTI yang tidak mengendahkan tuntutan mereka untuk membatalkan Lesen Sementara Operasi (TOL) semenjak penyerahan memorandum ke MITI akhir tahun yang lalu. -Huzir Sulaiman
The storage of wastes, that are generated in the refining process, shall be stored in designated facilities on the site, separately for three waste categories. According to chemist and nuclear waste expert Gerhard Schmidt, there will be problems with the pre-drying of wastes that is ofahigh Thorium content. "Especially in the wet and long monsoon season from September to January, this emplacement process doesn't work", says Schmidt. "The operator has not demonstrated how this problem can be resolved without increasing the radiation doses for workers".
Additionally the storages are only isolated withaone-millimeter thick plastic layer anda30 cm thick clay layer. This is insufficient to reliably enclose the several meters high and wet waste masses. "For the long-term management of these wastes Lynas has urgently to achieveasolution", claims Gerhard Schmidt, and adds: "in no case those wastes should be marketed or used as construction material, as currently proposed by the operator (Lynas) and the regulator (AELB/MOSTI). According to our calculations this would mean to pose high radioactive doses to the public via direct radiation".
„One of the most serious abnormalities is that in the documents relevant data is missing, which prevents reliably accounting for all toxic materials introduced", says project manager Gerhard Schmidt. "So it is not stated which and to what amount toxic by-products, besides Thorium, are present in the ore concentrate. Also in the emissions of the facility via wastewater only those constituents are accounted for that are explicitly listed in Malaysian water regulation, but not all emitted substances." The salt content of the wastewater is as high that it is comparable to seawater. This is discharged without any removal into the river Sungai Balok.
Especially for the safe long-term disposal of the radioactive wastesasuitable site that meets internationally accepted safety criteria has to be selected urgently. A consensus has to be reached with the affected stakeholders, such as the local public and their representatives. "If it further remains open how to manage those wastes inalong-term sustainable manner,afuture legacy associated with unacceptable environmental and health risks is generated", considers Schmidt. "The liability to prevent those risks and to remove the material is so shifted to future generations, which is not acceptable."
For many years rare earth metals were exclusively mined and refined in the People's Republic of China.
Posted: 01 Feb 2013 02:30 PM PST